သဘေ်ာရဲ့ ကိုယ်ထည် hull နဲ့ ရေမျက်နှာပြင် water surface တို့၊ ထိတွေ့နေတဲ့အမှတ်ကို ယေဘုယျ အနေနဲ့ "waterline" လို့ခေါါပါတယ်။ waterline ကို၊ သဘေ်ာကိုယ်ထည်ရဲ့ amidships လို့ခေါါတဲ့ အလယ်နေရာလောက်မှာ၊ special marking အနေနဲ့ သိသာထင်ရှားစွာဖော်ပြထားလေ့ရှိပြီး၊ national Load Line သို့မဟုတ် Plimsoll Line လို့လည်းခေါါပါတယ်။ specific water types and temperatures လို့ခေါါတဲ့ ရေအမျိုးအစားနဲ့ ရေရဲ့ အပူချိန်ကွဲပြားမှုတွေကြောင့်၊ သဘေ်ာကို ပင့်တင်ထားမယ့် ရေပင့်အား buoyancy လည်း၊ ကွာခြားတတ်ပြီး၊ ကုန်တင်တဲ့အခါတိုင်း သဘေ်ာကိုယ်ထည် hull နဲ့ ရေမျက်နှာပြင် water surface တို့၊ ထိတွေ့နေတဲ့အမှတ် water line လည်းပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ water line ပြောင်းလဲခြင်းဟာ သဘေ်ာရဲ့ ရေစူး draft ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရေမှာ၊ ပျော်ဝင်နေတဲ့ ဆားအငံဓါတ် salinity of the water ပါဝင်မှုအနည်းအများကြောင့်၊ ရေပင့်အား buoyancy ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
ဆားအငံဓါတ်များတဲ့အခါ ရေပင့်အား ပိုလာပြီး၊ သဘေ်ာရဲ့ ရေစူး draft လည်း၊ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေကြောင်းခရီးသွားလာမှု merchant shipping အဖြစ်၊ တနေရာနဲ့တနေရာသို့ သွားလာရတဲ့ သဘေ်ာတွေမှာ၊ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင် မတူညီမှုတွေကြောင့် ပေါါပေါက်လာရတဲ့ သဘေ်ာရဲ့ ရေစူး draft အပြောင်းအလဲကို၊ legal limit အနေနဲ့ တရားဝင်လက်ခံနိုင်အောင်၊ ဗြိတိသျှပါလီမန်အမတ် တဦးဖြစ်သူ 'Samuel Plimsoll' ဟာ (၁၈၇၀) ခုနှစ်လောက်တုန်းက၊ တီထွင်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး၊ Plimsoll Line သို့မဟုတ် Plimsoll Mark လို့၊ ခေါါဝေါါသုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ်။ waterline length လို့ခေါါတဲ့ သဘေ်ာရဲ့ ကိုယ်ထည် hull နဲ့ ရေမျက်နှာပြင် water surface တို့၊ ထိတွေ့နေတဲအရှည်အလျှားဟာ၊ သဘေ်ာရဲ့ 'displacement hulls' တနည်းအားဖြင့် သဘေ်ာ hull ရဲ့ water line အောက်မှာ ရှိတဲ့ ထုထည်ကို သဘေ်ာရဲ့ အလျှား length, ရေထဲမှာ ရှိနေမယ့် ရေစူး draft နဲ့ သဘေ်ာရဲ့ ဗျက် breadth တို့ကိုမြှောက်ခြင်းဖြင့်၊ ရရှိလာတဲ့ တန်ဘိုးတို့အပြင်၊ သဘေ်ာရဲ့ အမြန်နှုံး 'hull speed' ကိုပါအပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပေါါစေတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ 'load line' ကိုသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် လုံလောက်တဲ့ sufficient freeboard လို့ခေါါတဲ့ သဘေ်ာရဲ့ water line နဲ့ main deck အကွာအဝေးကိုရရှိစေပြီး၊ reserve buoyancy လို့ခေါါတဲ့ waterline နဲ့ main deck အကြားမှာ enclosed volume ကိုလည်းရရှိစေပါတယ်။
ကုန်သွယ်ရေကြောင်း commercial vessels သဘေ်ာတွေရဲ့ freeboard ကို၊ waterline နဲ့ သဘေ်ာရဲ့ဘေးမှ အပေါါဆုံး uppermost continuous deck ရဲ့ lowest point တို့ကြား အကွာအဝေးအဖြစ်၊ တိုင်းတာသတ်မှတ်ပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေကြောင်း commercial vessels သဘေ်ာတွေရဲ့ freeboard ကို၊ waterline နဲ့ သဘေ်ာရဲ့ဘေးမှ အပေါါဆုံး uppermost continuous deck ရဲ့ lowest point တို့ကြားအကွာအဝေးအဖြစ်၊ တိုင်းတာသတ်မှတ်ပါတယ်။ ကုန်တင်ထားတဲ့ သဘေ်ာတစီးရဲ့ freeboard အတိုင်းအတာအကွာအဝေးဟာ၊ သဘေ်ာရဲ့ 'Load Line Certificate' မှာဖော်ပြထားတဲ့ freeboard marked အတိုင်းအတာအကွာအဝေးထက်၊ must not be less than မလျှော့နည်းဖို့လိုပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေကြောင်း commercial vessels သဘေ်ာတွေရဲ့ ကိုယ်ထည်မှ amidships လို့ခေါါတဲ့ အလယ်နေရာလောက်မှာ၊ load line symbol သက်ေတကို၊ permanently marked အနေနဲ့ ဖော်ပြထားလေ့ရှိပြီး၊ သဘေ်ာဟာ overloaded အနေနဲ့ ဝန်ပိုသယ်ဆောင်ထားခြင်း၊ ရှိမရှိကို load line symbol သက်ေတအားကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်၊ အလွယ်တကူသိနိုင်ပါတယ်။
လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ load line symbol သက်ေတကို international load line သို့မဟုတ် Plimsoll line လို့ခေါါပါတယ်။ တနေရာမှတနေရာသို့ကူးသန်းကာ various operating conditions ဆိုတဲ့ သဘာဝ ပါတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာ၊ သဘေ်ာသွားလာခုတ်မောင်းတဲ့အခါ၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေပြီး minimum freeboard နဲ့ maximum safe draft တို့ကို၊ သတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Load Line တည်နေရာ တွက်ချက်သတ်မှတ်ပေးခြင်း calculation and verification ကို၊ သက်ဆိုင်ရာ Classification Societies တွေမှဆောင်ရွက်ပေးပြီး၊ သက်သေခံ statutory certificate လက်မှတ်၊ ထုတ်ပေးပါတယ်။
load line regulations ဟာ၊ ခရစ်တော်မပေါါခင် ဘီစီ ၂၅၀၀ ခုနှစ်ကတည်းက၊ ပေါါပေါက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အလယ်ခေါါတ်မှာလည်း load line regulations ကို ကျင့်သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ အလယ်ခေါါတ် ဂျီနိုဝါ Genoa ရဲ့ load line symbol ဟာ အလျှားလိုက် horizontal line (၃) လိုင်းဖြစ်ပြီး၊ ဗင်းနစ် Venice ရဲ့ load line symbol ကတော့ cross marked လို့ခေါါတဲ့၊ ကန့်လန့်ဖြတ် ကြက်ခြေခတ် အမှတ်အသား ဖြစ်ပါတယ်။ (၁၉) ရာစုမှာတော့ သဘေ်ာပိုင်ရှင် shipowners တွေ၊ ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူ shippers တွေနဲ့ အာမခံကိုယ်စားလှယ် underwriters တွေဆွေးနွေးကြပြီး၊ Lloyd's Register of British and Foreign Shipping ဆိုတဲ့ classification society မှ၊ (၁၈၃၅) ခုနှစ်မှာ ကုန်တင်ကုန်ချ loading recommendations အဖြစ်၊ သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး Lloyd's ရဲ့ load line သတ်မှတ်ချက်ကတော့ three inches per foot of depth ဆိုတဲ့ သဘေ်ာပေါါကုန်တင်တဲ့အခါ hold (၁) ပေနက်သွားတိုင်း၊ freeboards (၃) လက်မကျန်ရမယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ရေပေါါပေါါနေမယ့် freeboards နဲ့ ကုန်ပေါါက်ရဲ့အနက် depth of the hold တို့ရဲ့ ဆက်သွယ်ချက်ဖြစ်ပြီး၊ "Lloyd's Rule" အနေနဲ့ (၁၈၈၀) ခုနှစ်အထိ၊ လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့ကြပါတယ်။
(၁၈၆၀) ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ ဝန်ပိုသယ်ဆောင်မှုကြောင့် increased loss of ships due to overloading အနေနဲ့ သဘေ်ာနစ်မြုတ်ပျက်စီးမှုတွေ၊ ဆုံးရှုံးမှုတွေ ပိုမိုများပြားလာတဲ့အခါ၊ ဗြိတိသျှပါလီမန်အမတ် တဦးဖြစ်သူ 'Samuel Plimsoll' ဟာ United Kingdom Merchant Shipping Act အနေနဲ့ load line mark သက်ေတကို၊ သတ်မှတ်ပြဌာန်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ load line mark သက်ေတအား compulsory အနေနဲ့ မရှိမဖြစ် ရေးဆွဲထားခြင်းကို (၁၈၉၄) ခုနှစ်လောက်မှသာ၊ ကျင့်သုံးနိုင်တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ (၁၉၀၆) ခုနှစ် မှာတော့ ဗြိတိသျှဆိပ်ကမ်းတွေကို၊ ဝင်ရောက်လာမယ့် အခြားတိုင်းပြည်မှ၊ သဘေ်ာတွေမှာလည်း၊ load line mark သက်ေတအား compulsory အနေနဲ့ မရှိမဖြစ် ရေးဆွဲထားရန် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၃၀) ခုနှစ်မှာတော့ universal application အနေနဲ့ ကျယ်ပြန့်စွာ လိုက်နာ ကျင့်သုံးနိုင်စေရန်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှု international agreement အဖြစ်၊ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး The 1930 Load Line Convention မှတဆင့် load line regulations ကိုညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၆၆) ခုနှစ်မှာ 1930 load line regulations ကိုပြန်လည်သုံးသတ်ခဲ့ပြီး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှု international agreement တခုဖြစ်တဲ့ The 1966 Convention အရ load line regulations အား၊ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့သလို၊ (၁၉၇၁), (၁၉၇၅), (၁၉၇၉), (၁၉၈၃), (၁၉၉၅) နဲ့ (၂၀၀၃) ခုနှစ်တွေမှာလည်း၊ ပြင်ဆင်ချက် amendments တွေထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
နဂိုမူလ original "Plimsoll Mark" အမှတ်အသားဟာ စက်ဝိုင်း circle ကို ကန့်လန့်ဖြတ်ထားတဲ့ အလျှားလိုက် horizontal line ပါရှိတဲ့ သက်ေတဖြစ်ပြီး၊ သဘေ်ာရဲ့ အများဆုံး maximum draft ရေစူးကိုဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ sea conditions မတူညီမှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ ရေရဲ့သိပ်သည်းဆပြောင်းလဲမှုတွေအပေါါ၊ အခြေခံပြီး စက်ဝိုင်းပုံ "Plimsoll Mark" ရဲ့ဘေး တဖက်တချက်နေရာတွေမှာ၊ additional marks သက်ေတတွေကို၊ ထည့်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။ စက်ဝိုင်းပုံ အမှတ်အသားရဲ့ဘေးမှာ၊ သက်ဆိုင်ရာ classification society ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ စာသား သက်ေတတွေကို၊ အတိုကောက် initials အနေနဲ့ထည့်သွင်းဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ "AB" ဟာ American Bureau of Shipping classification society ကိုကိုယ်စားပြုပြီး၊ "LR" ကတော့ Lloyd's Register classification society ကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်။ "BV", "NK", "GL" နဲ့ "DNV" အစရှိတဲ့ စာသားသက်ေတတွေကတော့ Bureau Veritas, Nippon Kaiji Kyokai, Germanischer Lloyd နဲ့ Det Norske Veritas classification society တို့ကို၊ ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ စာသားသက်ေတဟာ အမြင့် (၁၁၅) မီလီမီတာနဲ့ ဗျက်အကျယ် (၇၅) မီလီမီတာအရွယ်အစားရှိရန်၊ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Fig. Load Line Mark and Lines for commercial sailing vessels
ဒါ့အပြင် sea conditions မတူညီမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ ရေရဲ့ သိပ်သည်းဆပြောင်းလဲမှု အမှတ်အသားမျှဉ်းတွေကိုတော့၊ TF, F, T, S, W နဲ့ WNA ဆိုတဲ့ စာသားသက်ေတတွေဖြင့်၊ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ "TF" ဟာ အပူပိုင်းရေချို tropical fresh water ဒေသကိုကိုယ်စားပြုပြီး၊ "F" နဲ့ "T" တို့ကတော့ ရေချို fresh water ဒေသနဲ့ အပူပိုင်းရေငံ tropical sea water ဒေသတို့ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ အလားတူ "S", "W' နဲ့ "WNA" တို့ကတော့ အအေးပိုင်းနွေရာသီရေငံ summer temperature sea water ဒေသ, အအေးပိုင်းဆောင်းရာသီရေငံ winter temperature sea water ဒေသနဲ့ မြောက် အတ္တလန်တိတ်ဆောင်းရာသီ winter north Atlantic ရေပြင်ဒေသတို့ကို၊ ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
ယေဘုယျအနေနဲ့ ရေချို fresh water သိပ်သည်းဆ density ဟာ၊ 1000 kg/m³ ရှိပြီး၊ ရေငံ sea water ရဲ့ သိပ်သည်းဆ density ကတော့ 1025 kg/m³ ရှိပါတယ်။ သဘေ်ာဟာ ရေချိုဒေသမှာ သွားလာ ခုတ်မောင်းစဉ် သိပ်သည်းဆနည်းတဲ့အတွက်၊ float deeper အနေနဲ့ရေထဲမှာ ပိုမိုနစ်မြုတ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေချိုဒေသမှာ fresh water mark အမှတ်အသားအထိရေထဲနစ်မြုတ်နေအောင်၊ ကုန်တင်ခဲ့တဲ့သဘေ်ာဟာ sea water ဆိုတဲ့ရေငံဒေသသို့၊ ဝင်ရောက်ခုတ်မောင်းတဲ့အခါ summer mark အမှတ်အသားအထိရေပေါါ၊ ပေါါလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ အပူပိုင်းရေချို tropical fresh water ဒေသမှာ၊ ကုန်တင်ခဲ့တဲ့သဘေ်ာဟာ၊ အပူပိုင်းရေငံ tropical sea water ဒေသသို့ ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ၊ tropical mark အမှတ်အသားအထိရေပေါါ၊ ပေါါလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Dimensions ofahull and longitudinal main deck curvature
summer load line ဟာ၊ primary load line အမှတ်ဖြစ်ပြီး၊ အခြားအမှတ်တွေရဲ့ derivative ဆိုတဲ့ မူလဇစ်မြစ်အမှတ်အသား၊ ဖြစ်ပါတယ်။ summer load line သတ်မှတ်ထားရှိမယ့်နေရာကို၊ "Load Line Rules" အပေါါအခြေခံပြီး၊ length of ship ဆိုတဲ့သဘေ်ာရဲ့ အလျှား၊ type of ship ဆိုတဲ့ သဘေ်ာ အမျိုးအစား၊ number of superstructures ဆိုတဲ့ ပင်မကိုယ်ထည်ပါဝင်မှုအရည်အတွက်၊ amount of sheer ဆိုတဲ့ အလျှားလိုက် longitudinal main deck curvature အကွေးအဝိုက်ပမာဏနဲ့ bow height ဆိုတဲ့ သဘေ်ာဦးရဲ့ အမြင့်၊ အစရှိတဲ့အချက်အလက်ပေါင်းများစွာနဲ့အတူ၊ တွက်ချက်ရယူပါတယ်။ plimsoll mark စက်ဝိုင်း circle ကို ကန့်လန့်ဖြတ်ထားတဲ့ အလျှားလိုက် horizontal line နဲ့ summer load line တို့ဟာ၊ တပြေးညီ same level အနေနဲ့ရှိနေမယ့် အမှတ်အသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ summer load line "S" ရဲ့ အောက်မှာ winter load line "W" ရှိနေပြီး၊ summer load line ရဲ့ အပေါါမှာတော့ tropical load line "T" ရှိနေပါတယ်။ summer load line "S", winter load line "W" နဲ့ tropical load line "T" တို့ရဲ့ အကွာအဝေးတွေဟာ၊ အစဉ်လိုက် 'cardinal number' အကွာအဝေးတွေဖြင့်၊ တည်ရှိနေပါတယ်။
fresh Water load line "F" ကိုတော့ summer load line ရဲ့အထက်၊ "∆/ 40T centimeters " အကွာအဝေးမှာ၊ သတ်မှတ်ထားရှိပါတယ်။ '∆' ဟာ summer load draft မှာရှိမယ့် သဘေ်ာရဲ့ displacement ဖြစ်ပြီး၊ metric tonne ယူနစ်ဖြင့်ဖော်ပြပါတယ်။ 'T' ကတော့ 'metric tonnes per centimeter immersion at that draft' ဆိုတဲ့ သဘေ်ာပေါါကုန်တင်တဲ့အခါ၊ ကုန် (၁) မက်ထရစ်တန် တင်တိုင်း၊ နစ်ဝင်သွားမယ့် ရေစူးရဲ့ အတိုင်းအတာ စင်တီမီတာပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံ သဘေ်ာ တည်ဆောက်ပုံ အနေအထားအရ၊ fresh water load line ဟာ tropical load line နဲ့ တပြေးညီ same level အနေနဲ့ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ fresh water load line နဲ့ summer load line ဆက်စပ်နေသလို၊ tropical fresh water load line "TF" ဟာလည်း၊ tropical load line "T" နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ winter north Atlantic load line "WNA" ဟာ winter mark "W" ရဲ့အောက်ဖက် (၅၀) မီလီမီတာ အကွာအဝေးမှာ ရှိနေပြီး၊ မြောက်အတ္တလန်တိတ်ရေပြင်ဒေသမှာ၊ ဆောင်းရာသီအတွင်း ခုတ်မောင်းသွားလာမယ့် အလျှား မီတာ (၁၀၀) အရှည်အောက် သဘေ်ာတွေအတွက်၊ သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အချို့သဘေ်ာတွေကို၊ certain additional conditions ဆိုတဲ့ သဘေ်ာတည်ဆောက်ပုံအနေအထားအရ 'timber freeboards' ဆိုတဲ့ load line သတ်မှတ်ချက်တွေထားရှိပြီး၊ "Timber load line marks" လို့ခေါါပါတယ်။ သဘေ်ာရဲ့ ဦးပိုင်း forecastle ဟာ သဘေ်ာရဲ့အလျှား length ရဲ့ အနည်းဆုံးအချိုးအဆ 0.07 ပမာဏရှိပြီး၊ standard height အမြင့်ထက်မလျှော့ပဲတည်ဆောက်ထားတဲ့ သဘေ်ာတွေမှာ 'timber freeboards' အမှတ်အသားပါရှိပါတယ်။ သဘေ်ာရဲ့အလျှား length (၇၅) မီတာမှာ forecastle ရဲ့အမြင့်ဟာ အနည်းဆုံး (၁. ၈) မီတာရှိပြီး၊ အလျှား length (၁၂၅) မီတာမှာ၊ forecastle ရဲ့အမြင့်ဟာ အနည်းဆုံး (၂. ၃) မီတာ ရှိရန်လိုအပ်ပြီး၊ standard height အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အလျှား length (၁၂၅) မီတာထက်ပိုပြီး intermediate heights အနေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့၊ သဘေ်ာတွေနဲ့ အလျှား (၁၀၀) မီတာအောက်မှာ poop သို့မဟုတ် raised quarter deck တွေ၊ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ သဘေ်ာတွေမှာလည်း၊ 'timber freeboards' အမှတ်အသား ပါရှိပါတယ်။ ရေရဲ့ သိပ်သည်းဆပြောင်းလဲမှု အမှတ်အသားမျှဉ်းတွေကို ကိုယ်စားပြုဖော်ပြတဲ့ TF, F, T, S, W နဲ့ WNA ဆိုတဲ့ စာသားသက်ေတတွေရဲ့ရှေ့မှာ၊ "L" prefixes အက္ခရာအတိုကောက်ကို၊ 'timber load lines' အဖြစ်ရေးသားလေ့ရှိပါတယ်။ 'timber load lines' အမှတ်အသားပါတဲ့ သဘေ်ာတွေဟာ၊ deck cargo အဖြစ်ကုန်းပတ်ပေါါမှာ၊ သစ်လုံးတွေကို သယ်ဆောင်တဲ့ log carrier သဘေ်ာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးသည်တင်သဘေ်ာ passenger ships တွေမှာ၊ ခရီးသည်လိုက်ပါစီးနင်းရာ accommodation space တွေအပြင်၊ ကုန်ပစ္စည်းသယ်ဆောင်ရာ cargo space တွေကိုပါထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပြီး၊ တခုသို့မဟုတ် တခုထက်ပိုတဲ့ additional load line marks တွေရေးဆွဲသတ်မှတ်ထားတတ်ပါတယ်။ လိုက်ပါစီးနင်းသူ passengers ခရီးသည်နဲ့ ကုန်ပစ္စည်း cargo အနည်းအများ၊ အပြောင်းအလဲ အမြဲ ရှိနေသလို၊ နေရာဒေသမတူညီတဲ့ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာ၊ သဘေ်ာသွားလာ ခုတ်မောင်းနေရတဲ့အတွက်၊ ရေစူး draft အပြောင်းအလဲအမြဲရှိနေခြင်းကြောင့် additional load line marks တွေကို၊ ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပြီး၊ 'subdivision load line marks' လို့ခေါါပါတယ်။ subdivision load line marks တွေကို C1, C2 နဲ့ C3 ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားထားသလို၊ C1 သက်ေတဟာ principal passenger condition ဆိုတဲ့၊ ခရီးသည်အပြည့် အခြေအနေကို၊ ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
Reference : Nicolette Jones, The Plimsoll Sensation. The Great Campaign to Save Lives at Sea, London, Little, Brown, 2006. ISBN 0-316-72612-2., The Merchant Shipping (Load Line) Regulations 1998, as amended by the Merchant Shipping (Load Line) (Amendment) Regulations 2000., Statutory Instruments 1998 No. 2241 The Merchant Shipping (Load Line) Regulations 1998 Sections 5(1) and 5(3)., Dawson, Philip (2005). The Liner. WW Norton & Company. ISBN 0-393-06166-3.
Posted by ကိုထွန်း at 23:03